साहित्य/विचार Archives - Page2of6- www.kchhakhabar.com
मैले जसरि पनि पूरा गर्नु पर्ने तिमी
मैले जसरि पनि पूरा गर्नु पर्ने तिमी अब रतिभर पनि शङ्का नगर मैले घर फर्कने निर्णय छोडिदिएं तिमी चाहन्थ्यौ पनि यहि तिम्रा आंगनको बाटो नहिड्नु नफर्कनु तिमीले हुर्काएको बगैचातिर नसोध्नु कसैलाई पनि तिम्रो खबर मेरा आंखिझ्यालबाट नहेर्नु तिम्रो बार्दलि नलेख्नु तिमीलाई लिएर मेरो जीवनको कविता नलिनु स्वास तिमीलाई छोइआउने बतासको तिम्रो चाहना यहि थियोे यतिबेला तिमीले गुनगुनाउने कुनै पनि ग...
झमकको जन्मदिन, ओलीदेखि राष्ट्रकविसम्मको जमघट
साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित बृत्तचित्र हेर्नेहरुको भीड बुधवार ललितपुरको रातोबंगला स्कूलको हलभरी थियो । झमकको जन्मदिन पारेर गरिएको उनको बायोग्राफीमा आधारित बृत्तचित्र हेर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे दम्पती, र संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी पनि पुगेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई नेपाली चलचित्रकि प्रथम नायिका भुवन चन्दले खादा ओढाईदिएकि थिईन् । बाहिर...
बिहिबार, आषाढ २२, २०७४
१४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको गीत
मेची ताप्लेजुङ पाँचथर जिल्लामा इलाम झर्यो झापाको किल्लामा चिया सस्तो छ पुगेर फर्कनु मेची कस्तो छ ? कोसी संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम धनकुटामा विकास छ उधुम मोरङ, सुनसरी कोसीको तीरमा पुगौँ कसरी ? सगरमाथा सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर ओखलढुङ्गा जाने छ अझै सुर सगरमाथा गेट सप्तरी काटेर सिरहामा भेट । जनकपुर महोत्तरी, दोलखा, रामेछाप जनकपुरमा सीताको ठूलो छाप धनुषाको दाइ सिन्धुली पुगेर झर्नोस...
दीपक घिमिरे कलङ्की जाममा पुगेपछि ऊ आफ्नो ह्यान्डब्याग र एउटा अलि ठूलै ब्याग बोकेर गाडीको ढोकानिर पुगी । मैले ऊ झर्न थालेको महसुस गरेँ । मलाई नयाँ बसपार्क नै पुग्नु थियो । हतार केही थिएन । हाम्रा आँखा जुधेका थिए । मनले मन पराइसकेको थियो तर बोली फुटेको थिएन । म पनि कलङ्की झर्ने निधो गरेँ । कछुवाको गतिमा हिँडेको बस कलङ्की आकासे पुल क्रस गरेर रोकियो । ऊ झरी अनि ऊसँगै म झरे । खलासीले उसका दुई बोरा ...
रुपा नामले मात्र होइन वास्तविक रुपमा नै निकै राम्री थिई । काली–काली हिस्सी परेकी, सलक्क परेको जिउडाल र यौवनले भरिपूर्ण शरीर भएकै कारणले होला गाउँका सम्पूर्ण युवकहरु रुपा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने गर्दथे । रुपालाई आर्कषित गर्नका लागि मञ्चित नाटकहरु हेर्न निक्कै रोमाञ्चकारी हुने गर्दथ्यो । उनिहरुले रुपालाई लोभ्याउनका लागि गरको सहयोग सबै नक्कली लाग्दथ्यो । रुपा आफैंलाई पनि आफ्नो सुन्दरतामा गर्व थियो । छि...
एउटा सिङ्गो जीवन — ‘अक्षरमा मान्छे’
आलोक खनाल ‘कविता आफ्नै मत, आफ्नै अभिमत’ यो शिर्षक कवि खरेलको अक्षरमा मान्छे कविता सङ्ग्रह भित्र लेखिएको आफ्नो विचार पक्षको हो । म अलिकति उक्त विचार पक्षको कुरा गर्छुृ । कवि खरेलले शुरुमा नै लेखेका छन् — ‘सकारात्मक हेराई’ । सकारात्मक चिन्तन उनले आफ्नो पुस्तक ‘रे’ निवन्ध सङ्ग्रहमा पनि प्रयोग गरेकै विषय हो । यसको अर्थ हुन्छ उनी जीवनका अधिकांश विषयलाई सकारात्मक दृष्टिकोणवाट हेर्ने गर्छन् । यही विचारप...
शुक्रबार, आषाढ १६, २०७४
चौथो पटक विबाह र सुवागरात
एउटै व्यक्तिसँग तीनपटक विवाह१ दोस्रोपटक फेरि सम्बन्ध विच्छेद१ यो कस्तो आग्रह होरु कस्तो नियतिरु वैवाहिक सम्बन्धको पनि के अर्थ रह्योरु विवाह, सम्बन्ध र विच्छेद– खरिपाटीमा लेख्दै मेट्दै गरेजस्तो१’ यस्तै कुरा मडारिएपछि सावित्रीको मनले यसपटकको सम्बध विच्छेद स्वीकार्न सकेन। लोग्नेले सोचेर आजै जवाफ दिनु भनेको छ। ऊ रनभुल्लमा परी। दिनभर उसलाई खटपट भइरह्यो। साँझमा घरधन्दा सकी। बच्चाहरूलाई खाना खुवाएर सुताई...
ज्युदै भए पनि भित्र भित्र म कत्तिपटक मरेको छु, तिमी बुझ्दिनौ । बुझ्ने सामर्थ्य यदि तिमीमा भाको भए,यस्तो खबर सायदै सुन्नु पर्थेन होला । आफ्नो जीवन तिम्रै लागि साँचेर बाचिरहेको थिए । तर तिमी भने ठिक विपरीत सोच्दी रहिछौ । तिम्रै खुशीका लागि निरन्तर श्रम गरिरहे अरबमा, तिमी भने मेरो श्रमको उपजलाई दुरुपयोग गरेर मेरो खिसिटिउरी गर्नमा तल्लिन भयौ । यो चाल पाएपछी, म ज्यादै विक्षिप्त भएको छु । मेरो मन धुजा ध...
बिना तामाङ’सुनगाभा’ चौडा निधार, ठुला ठुला आँखा, कालो लामो केशकी धनी निशाको विवाह रमेशसँग भएको लगभग दुई बर्ष बितिसकेको थियो । अन्तर्मुखी स्वभावको २८ बर्षीय रमेश आफूभन्दा ५ बर्ष कान्छी, सुन्दर जीवनसाथी पाउँदा निकै हर्षित र दङ्ग थियो । झट्ट हेर्दा रमेश र निशाको जोडी कता कता अमिल्दो देखिन्थ्यो । पातलो, अग्लो कदको रमेश युवा अवस्थामै अलिक कुप्रो देखिन्थ्यो भने नाक लामो भएकोले होला आँखाहरू खोपिल्टाभित्र...
अहिले नेपाली नागरिकको ध्यान भरतपुर १९ नम्बर वडाको वरिपरी घुमिरहेको छ । ऐतिहासिक उपलब्धीको संस्थागत विकास साथै संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्थानीय तहको निर्वाचन ३ प्रदेशमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ । धेरै स्थानमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो काम अगाडि बढाईसकेका छन् । तर विडम्वना अहिलेसम्म भरतपुरवासीले भने मतपरिणामको अन्तिम नतिजा पाएका छैनन् । पछिल्ला नियोजित घटनाहरुको पक्षपोषण गर्दै निर्वाचन...